CCCOI - ewa.mg
BASKET-BALL CCCOI 2018 :: Tompondakan’i Afrika faritra Fahafito ny Cospn
Norombahin’ny ekipan’ny Pôlisim-pirenena malagasy, Cospn, ny anaram-boninahitra tompondakan’i Afrika Faritra fahafito, taranja basket-ball. Lavon’izy ireo tamin’ny alalan’ny isa 86 noho 70 ny ekipan’ny Premium Cobra avy any Seychelles, omaly, nandritra ny lalao miendrika famaranana notanterahina tany amin’ity Nosy ity. Fandresena dimy sy faharesena tokana no azon’ity solontena malagasy tokana tamin’ny fiadiana ny ho tompondakan’ny ranomasimbe Indianina natao nandroso sy niverina ity. Ankoatra ny anaram-boninahitra azon’izy ireo dia voahosotra ho mpilalao mendriky ny fifaninanana ihany koai Livio Ratianarivo, mpilalao malagasy, efa nandrafitra ny ekipam-pirenena tamin’ny Afrobasket U18 noraisintsika teto Madagasikara tamin’ny taona 2014. Vao teo amin’ny ampahefa-potoana voalohany dia efa nanjakazaka ny ekipan’ny Pôlisim-pirenena malagasy. Teo amin’ny fotoam-pialan-tsasatra dia nitarika tamin’ny isa 45 noho 29 ity solontena malagasy ity. Nitombo izany teo amin’ny ampahefa-potoana fahatelo (67 – 50). Izy ireo izany no hisolo tena ny Faritra fahafito amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika na ny “Afroligue 2019”. L’article BASKET-BALL CCCOI 2018 :: Tompondakan’i Afrika faritra Fahafito ny Cospn est apparu en premier sur AoRaha.
Tohizo ny famakiana >>
Basikety – “CCCOI”: manana isa 9 ny CosPN, hatreto
Basikety – “CCCOI »: mbola voatazon’ny CosPN ny tanjany
Mihamitombo hatrany ny herijika ho an’ny ekipan’ny CosPN, solontena malagasy miatrika ny lalao fiadiana ny amboaran’ny klioba tompondakan’ny ranomasimbe Indianina, taranja basikety. Nanomboka, omaly alahady, ny lalao miverina ka nahazo fandresena nanoloana ny Beau Vallon avy Seychelles indray ny ekipa malagasy. Tamin’ny isa mavesatra 90 no ho 65 ny nandavoan’ny CosPN ity ekipa mpifanandrina taminy ity.Raha hiverenana ny lalao efa vitan’ny ekipa malagasy nandritra izany, azo lazaina ho tsara ny vokatra tamin’ny andro voalohany sy faharoa, nandritra ny lalao mandroso. Fahombiazana roa sosona ny azon’ny CosPN ary nanamarika sia mavesatra hatrany ny mpilalao malagasy. Nomontsain’ny CosPN tamin’ny isa 89 n oho 79 ny ekipan’ny Beau Vallon avy any Seychelles, raha toa ka mbola isa mavesatra 94 no ho 40 ny nandavoany ny ekipan’ny Flippers avy any Maorisy, ny alakamisy lasa teo. Tamin’ny andro fahatelon’ity lalao mandroso vao tojo faharesena ny ekipa malagasy ka nomontsanin’ny Cobras avy any Seychelles ny CosPN, tamin’ny isa hety dia hety 66 no ho 67.Ho amin’ny tohin’ny fandaharam-potoana, mbola tsy maintsy handingana ny ekipan’ny Premium sy ny Cobras indray ny CosPN mandritra ny andro faharoa sy fahatelo amin’izao lalao miverina izao. Mi.RazL’article Basikety – “CCCOI »: mbola voatazon’ny CosPN ny tanjany a été récupéré chez Newsmada.
Basikety – CCCOI: tsy nahatohitra ny Cobras ny CosPN
Niditra tamin’ny andro fahatelo amin’ny lalao mandroso amin’ny fifanintsanana, ny fiadiana ny amboaran’ny klioba tompondakan’ny ranomasimbe indiana, taranja basikety, omaly. Tsy nahatohitra ny ekipan’ny Cobras, Seychelles, ny ekipan’ny CosPN. Isa 66 no ho 67 no nisarahan’ny roa tonta na dia niady mafy azy ny ekipa malagasy. Raha hiverenana ny lalao efa vitan’ny ekipa Malagasy, nandritra izay telo andro izay, azo lazaina ho tsara ny vokatra tamin’ny andro voalohany sy faharoa. Fahombiazana roa sosona no azon’ny CosPN ary nanamarika isa mavesatra hatrany ny mpilalao malagasy. Nomontsanin’ny CosPN tamin’ny isa 89 no ho 79 ny ekipan’ny Beau Vallon avy any Seychelles, raha toa ka mbola isa mavesatra 94 no ho 40 no nandavoany ny ekipan’ny Flippers avy any Maorisy, ny alakamisy lasa teo. Raha atao, araka izany, ny tambatr’isa, mbola manana vintana handrombaka ny amboara ny Malagasy. Marihina fa hanomboka rahampitso alahady ny lalao miverina amin’ity fifaninanana ity. Mi.RazL’article Basikety – CCCOI: tsy nahatohitra ny Cobras ny CosPN a été récupéré chez Newsmada.
Basikety – “CCCOI”: tsara fanombohana ny CosPN
Tontosa, omaly tany Seychelles, ny andro voalohany amin’ny fiadiana ny amboaran’ny klioba tompondakan’ny ranomasimbe Indianina, taranja basikety. Tsara ny vokatra ho an’ny ekipa solontena malagasy, nanoloana ny ekipan’ny beau Vallon, mpampiantrano ity fifaninanana ity. Nahomby ny lalao voalohany nikaran’ny CosPN an-kianja ary nomontsaniny tamin’ny isa 89 no ho 79 ny ekipan’i Seychelles. Nitarika ny isa hatrany am-boalohany ny ekipa malagasy nandritra ity fifanandrinana nafana vay ity ary tsy nitsaha-nitombo ny isa teny amin’ny solaitrabe. “Tsara ny fanomanana”, hoy ny mpilalao avy amin’ny CosPN, ka rariny ny fandresena, na nanano sarotra ihany aza ny fihaonana tamin’ity ekipa mpampiantrano ity. Mbola hitohy anio ny ady ho an’ny CosPN, ao anatin’ny andro faharoan’ny fifaninanana. Ekipa maorisianina, ny Mahebourg Flippers, ny miandry ny ekipa malagasy amin’ity anio ity. Ady goavana ihany koa ary ho mafy ho an’ny CosPN ny lalao eo aminy sy ny ekipan’ny Premium Cobras, anisan’ny kalaza avy any Seychelles. Lalao hatao, rahampitso zoma, andro fahatelo amin’ny fifaninanana. Nilaza ny ho tsy matahotra anefa ireo mpilalao malagasy ary vonona hiatrika izay ekipa rehetra mifanandrina, raha ny fanazavana. Ezahin’izy ireo hatrany ny ho lohany amin’ireo ekipa enina mandray anjara amin’izao fifaninanana izao. Marihina fa tsy nahatonga solontena ny Nosy La Réunion sy i Mayotte. Mi.RazL’article Basikety – “CCCOI”: tsara fanombohana ny CosPN a été récupéré chez Newsmada.
CCCOI 2018: Samy homena loka ny “arbitre” sy ny ekipa mendrika
Mampiantrano ny lalao iadiana ny tompondaka ny “handball” ho an’ny ranomasimbe Indiana (CCCOI) i Madagasikara. Hanomboka rahampitso 24 novambra 2018 tolakandro ity lalao ity. Ny sabotsy 1 desambra 2018 kosa ny lalao famaranana. Ny federasiona Malagasy ny handball sy ny fikambanana AHBOI (Association Handball Océan Indien) no mikarakara ny lalao. Tonga eto avokoa ny solontenan’ny ekipa avy amin’ireo firenena mpikambana ao amin’ny AHBOI afa-tsy i Comores . Nambaran’ny filohan’ny federasiona malagasy ny handball, Fidèle Razafintsalama fa mbola voasazy i Comores noho fananany filohan’ny federasiona roa. Efa mandeha ny fandravonana io raharaha io amin’izao fotoana izao. Handray anjara amin’ny CCCOI andiany faha-18 ny ekipa avy ao La Réunion, Mayotte, Rodrigues, Maurice, Seychelles ary i Madagasikara. Ekipa fito no mandrafitra ny sokajy zazalahy ary enina ny sokajy vehivavy. Ny COSFA sy ny Saint Michel no hisolo tena an’i Madagasikara amin’ny sokajy zazalahy. THBC sy Tsiky kosa ny zazavavy. Talohan’izao lalao izao, efa avy nahavita lalao iadiana ny tompondaka nasionaly avy amin’ny fireneny tsirairay avy ireto ekipa mandray anjara ireto. Nilaza ny filohan’ny AHBOI, Hairoudine Anzizi fa ho fanomezana lanja sy fanandratana ny taranja handball aty amin’ny faritry ny ranomasimbe Indiana ity lalao ara-pirahalahiana ity ka tsy ny ekipa mpandresy ihany no hotolorana amboara fa homena mari-pankasitrahana ihany koa ny “arbitre” mendrika. Nanamafy i Fidèle Razafintsalama fa tombony ho an’i Madagasikara ny fampiantranoana ny CCCOI. “25 tapitrisa ariary ny fandraisana anjaran’ny federasiona amin’ny fikarakarana ny lalao. Tsy mahefa ny sarany hitondrana ireo ekipa malagasy efatra anefa izany raha toa ka natao tany amin’ny firenena hafa ny lalao. Noho izany, mety amintsika ny fampiantranoana ny lalao eto”, hoy hatrany izy. Lynda A. Cet article CCCOI 2018: Samy homena loka ny “arbitre” sy ny ekipa mendrika est apparu en premier sur déliremadagascar.
BASKET-BALL – «CCCOI 2018» :: Klioba sivy aty amin’ny ranomasimbe Indianina hifaninana any Seychelles
Hotanterahina any Seychelles, amin’ny 5 – 11 desambra ho avy izao ny fiadiana ny amboaran’ny ranomasimbe Indianina, taranja basket-ball ho an’ireo klioba tompondaka (CCCOI 2018). Ekipa lehilahy enina sy vehivavy telo no hifanandrina mandritra ireo fito andro ireo, araka ny fantatra. Hanana solontena amin’izany i Madagasikara dia ny ekipan’ny Pôlisim-pirenena eo amin’ny sokajy lehilahy ary nanainga io maraina io. Nisafidy ny fifaninanana afrikanina kosa ny MB2All, tompondakan’i Madagasikara, ka tsy handeha ho any Seychelles. Hifaninana eo amin’ny sokajy lehilahy ny Cospn avy eto Madagasikara, Premium Cobras sy Beau Vallon Heat avy any Seychelles, Djabal avy any Kaomoro, Mahebourg Flippers BC sy Roche Bois Warrios BC avy any Maorisy. Ny ekipan’ny Montfrleuri Ladies Club sy B Challenge avy any Seychelles sy ny UCM avy any Kaomoro kosa no handray anjara eo amin’ny sokajy vehivavy. L’article BASKET-BALL – «CCCOI 2018» :: Klioba sivy aty amin’ny ranomasimbe Indianina hifaninana any Seychelles est apparu en premier sur AoRaha.
HANDBALL – CCCOI 2018 :: Hiatrika ny famaranana ny THBC sy ny Tamponnaise
Tafita hiatrika ny lalao famaranana eo amin’ny fiadiana ny amboaran’ny ranomasimbe Indianina, tanterahina eny amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina, rahampitso, ny ekipan’ny Tana Handball Club (THBC), tompondakan’i Madagasikara. Hifandona amin’ny ekipan’ny Tamponnaise, avy any La Réunion izy ireo eo amin’io ady farany hiadiana ny medaly volamena io. Tamin’ny dingan’ny fifanintsanana, izay nifaninanan’ireo ekipa rehetra tao anatin’ny vondrona tokana, dia efa niondrika teo anatrehan-dry zareo Renioney tamin’ny isa 21 noho 10 ny ekipan’ny Tana Handball Club. Fotoana iray hoentin’ity ekipa tompondakan’ny ranomasimbe Indianina imbetsaka ity mamita ny valin’adiny io famaranana io. Eo amin’ny sokajy lehilahy indray dia samy tsy tafita avokoa ny ekipan’ny Cosfa sy ny AS Saint-Michel, izay nisolo tena antsika teo amin’ity fifaninanam-paritra ity. Ny Château Morange sy ny Saint-Pierre, samy avy any La Réunion, no hifanandrina eo amin’ny lalao famaranana ho an’ity sokajy ity. L’article HANDBALL – CCCOI 2018 :: Hiatrika ny famaranana ny THBC sy ny Tamponnaise est apparu en premier sur AoRaha.
Handball – CCOI: miroso hatrany ny THBC
Tsara ny vokatra ho an’ny ekipan’ny THBC vehivavy, nandritra ny lalao, omaly, tetsy amin’ny lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina. Tsy ampy nandihizan’ity ekipa malagasy ity ny ekipan’ny Cap Sister avy any Seychelle ary nolavoiny tamin’ny isa mavesatra 23 no ho 9. Mazava, araka izany, ny lalana ho an’ny THBC, amin’ny fiakarana amin’ny dingana manaraka. Resin’ny ekipan’ny Tamponnaise avy any La Réunion kosa ny AS Tsiky rehefa avy niady mafy. Nifampitana hatrany am-panombohan’ny lalao ireto ekipa roa ireto, saingy noverezin’ny Renioney tamin’ny isa 22 no ho 17 ny ekipa malagasy, tamin’ny ora farany. Fandresena faharoa azon’i Madagasikara ny lalao nifanandrinan’ny AS Saint Michel sy ny Saint Pierre HBC, Renioney, teo amin’ny sokajy lehilahy izay nahazoan’ny ekipa malagasy ny isa 33 no ho 29. Mbola hitohy ho amin’ny anio ity fiadiana ny amboaran’ny ranomasimbe indianina amin’ny taranja hand ball ity ary hiroso amin’ny lalao fiadian-toerana ireo ekipa tsirairay. Rahampitso, asabotsy kosa no hanaovana ny lalao famaranana. Mi.Raz Valin-dalao omaly, alakamisy Vehivavy : AS TSIKY (MAD) 17 – 22 TAMPONNAISE (REU) CAP SISTER (SEY) 9 – 23 THBC (MAD) JSB (REU) 25 – 34 PC BOUENI (MAY) Lehilahy : CHATEAU MORANGE (REU) 25 – 25 ASC TSINGONI (MAY) AS SAINT MICHEL (MAD) 33 – 29 ST PIERRE HBC (REU)L’article Handball – CCOI: miroso hatrany ny THBC a été récupéré chez Newsmada.
Handball – «CCOI 2018 »: nitohy ny fahombiazan’ny ekipa malagasy
Niditra, tamin’ny andro fahadimy omaly, ny fifanintsanana hiadiana ny ho tompondakan’ny ranomasimbe Indianina (CCOI), taranja handball. Fihaonana, tanterahina etsy amin’ny lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina. Nitohy hatrany ny fahombiazan’ny ekipa malagasy, sokajy vehivavy. Samy nivoaka ho mpandresy avokoa mantsy ny THBC sy ny AS Tsiky. Ny THBC Analamanga, nanilika ny Boueni, tamin’ny isa 20 no ho 15. Natanjaka ary nahay nanafaingana ny lalao ry Domoina sy i Judith, nampian’i Zarinah. Nitarika anisa hatrany izy ireo, na teo amin’ny tapa-potoana voalohany na teo amin’ny fidirana faharoa. Tamin’ny isa mazava, 33 no ho 21, kosa ny nandavoan’ny AS Tsiky ny JSB. Nipetraka ny traikefa ananan-dry Sainah sy ry Elia. Nanantombo teo amin’ny tanjaka ihany koa ireo mpilalaon’i Mahajanga, tamin’ity. Mbola mitarika hatrany kosa ny Tamponnaise, eo amin’ity sokajy vehivavy ity, nanamontsana tamin’ny isa mavesatra, 32 no ho 5, ny Cap Sister avy atsy Seychelles. Teo amin’ny lehilahy, mbola nanaporofo ny maha andrarezina azy ny Chateau Morange, nanilika ny Vacoas, tamin’ny isa 32 no ho 19. Resin’ny Tsingoni, 33 no ho 23, kosa ny Durantha. Torcelin Fandaharan-dalao anio : Vehivavy -10:30 – Tamponnaise # AS Tsiky -11:45 – Cap Sister Seychelles # THBC -01:00 – JSB # Boueni Lehilahy -02:15 – Château Morange # Tsingoni -03:30 – Vacoas # Durantha -05:30 – ASSM # St PierreL’article Handball – «CCOI 2018 »: nitohy ny fahombiazan’ny ekipa malagasy a été récupéré chez Newsmada.
HANDBALL – «CCCOI 2018» :: Niverina tamin-kery ao anatin’ ny fifaninanana ny THBC
Rehefa avy nisedra fahasahiranana tany am-piandohan’ny fifaninanana dia tafaverina indray ny ekipan’ny Tana Handball Club (THBC), eo amin’ny fiadiana ny amboaran’ny ranomasimbe Indianina, ho an’ireo klioba tompondaka tanterahina eny amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina. Nisedra faharesena izy ireo, tamin’ ny lalao voalohany nihaonany tamin’ny Tamponnaise (10 – 21), niakaran’izy ireo kianja tamin’ny andro voalohany. Taorian’io dia tafavoaka ho mpandresy teo anatrehin’ny AS Tsiky avy any Boeny, solontena faharoan’i Madagasikara, ireto ekipan’ny Tana Handball Club ireto. Tamin’ny alalan’ny isa 18 noho 14 no nandresen’izy ireo tamin’izany. Omaly indray dia ny ekipan’ny Jeunesse Sportive Benedictine, avy any Saint-Benoît, La Réunion, no resin-dry Zarinah sy ny namany tamin’ny alalan’ny isa 22 noho 15. “Mety hisy ny faharesena amin’ny lalao iraisam-pirenena tahaka itony saingy tsy tokony hatao hahakivy izany. Tsy maintsy miezaka miarina rehefa sendra izany”, hoy i Zarinah Harinandrianina. Mitana ny laharana faharoa vonjimaika eo amin’ny vondrona tokana eo amin’ny sokajy vehivavy izy ireo, ankehitriny. Ny ASHB Tamponnaise no eo amin’ny laharana voalohany, rehefa nahavita lalao telo tsy nisy faharesena. Hifanandrina amin’ny PC Boueni avy any Mayotte ny THBC, anio, ka tsy maintsy mila fandresena raha te hitazona ny toerana faharoa. Teo amin’ny sokajy lehilahy indray dia nihiraha ihany ny masoandron’ny AS Saint-Michel, taorian’ireo faharesena indroa nisesy nahazo azy ireo. Lavon’ity ekipan’ny masindahy Misely ity tamin’ny alalan’ny isa 36 noho 30, ny ekipan’ny Vacoas avy any Maorisy. Resy teo anatrehan’ny Saint-Pierre HBC, tamin’ny isa 29 noho 22 kosa ny ekipan’ny Cosfa. L’article HANDBALL – «CCCOI 2018» :: Niverina tamin-kery ao anatin’ ny fifaninanana ny THBC est apparu en premier sur AoRaha.
Handball – «CCOI 2018»: samy nivoaka ho mpandresy ny Tsiky sy ny THBC
Nitohy omaly, tetsy amin’ny lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina, ny andro fahefatra amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’ny ranomasimbe Indianina, taranja handball, ho an’ny ekipa tompondaka. Tsara aloha ny vokatra ho an’ny ekipa malagasy, sokajy vehivavy. Nivoaka ho mpandresy avokoa mantsy izy ireo. Anisan’izany, ny THBC, nanilika ny JSB La Réunion, tamin’ny isa 22 no ho 15. Nanatombo teo amin’ny tanjaka sy ny fahaiza-manao ireo mpilalaon’ny THBC. Hain’izy ireo ny namezivezy baolina. Tsara ihany koa ny fiarovantena ka nanahirana ny Renionezy ny namaky izany. Tetsy an-kilany, nahazo fahombiazana ihany koa ny AS Tsiky, rehefa nandavo ny Cap Sister avy atsy Seychelles, tamin’ny isa mazava, 33 no ho 12. Toy ny nanao fanazarantena fotsiny ny mpilalao malagasy. Nifanalavitra ny fahaiza-manao teo amin’ny ekipa roa tonta. Ny Tamponnaise La Réunion, indray nanilika ny Boueni, avy any Mayotte, tamin’ny isa, 24 no ho 15. Ankoatra izay, teo amin’ny lehilahy, resin’ny AS St Michel, tamin’ny isa, 36 no ho 30 ny Vacoas, avy atsy Maorisy. Lavon’ny Chateau Morange La Réunion, 25 no ho 23 ny Durantha Seychelles. Hatreto, mbola mitarika eo amin’ny filaharana ho an’ny vehivavy, ny Tamponnaise, izay tsy mbola resy mihitsy. Toy izany koa ny Château Morange, eo amin’ny lehilahy. Hitohy anio ny fifanintsanana. Torcelin Fandaharan-dalao anio : Vehivavy 10 : 30 : THBC # Boueni 11 : 45 : Tamponnaise # Cap Sister Seychelles 01 : 00 : JSB # AS Tsiky Lehilahy 02 : 15 : Tsingoni # Durantha 03 : 30 : Château Morange # Vacoas 05 : 00 : ASSM # CosfaL’article Handball – «CCOI 2018»: samy nivoaka ho mpandresy ny Tsiky sy ny THBC a été récupéré chez Newsmada.
Handball – CCOI: nisongadina ny ekipa Reonioney
Niditra tamin’ny andro fahatelo amin’ny lalao fifanintsanana, fiadiana ny amboaran’ny ranomasimbe Indianina, taranja handball, omaly, ireo ekipa mpifanandrina. Nandritra izay andro telo nifanesy izay, nisongadina hatrany ny ekipa reonioney. Ekipa anisan’ny sangany miohatra amin’ireo mpifaninana hafa. Ho an’ny omaly, fandresena roa ny azon’ny Reonioney tamin’ny alalan’ny ekipan’ny Tamponnaise, vehivavy sy ny ekipan’ny Chateau Morange, lehilahy. Ity farany izay nifanandrina tamin’ny ekipan’ny ASSM, solontena malagasy ary nibata ny fandresena tamin’ny isa 20 no ho 19. Azo lazaina ho antonony ihany ny vokatra ho an’ny Malagasy tamin’ny andro voalohany, teo amin’ny Cosfa. Tsy afa-bela nanoloana ny mpifanandrina taminy izy ary hita ho mbola misy ny lesoka eo amin’ny teknika. Mi.Raz L’article Handball – CCOI: nisongadina ny ekipa Reonioney a été récupéré chez Newsmada.
Natation : Holy Antsa et Jonathan signent deux nouveaux records nationaux
A défaut de médailles, les deux nageurs représentants de la Grande île aux Championnats d’Afrique à Accra, Ghana ont pulvérisé deux nouveaux records nationaux. Jonathan Raharvel du COSFA a effacé l’ancien record du 50m brasse de 29’’84 en 29’’63. Il a terminé 4e de sa série et s’est qualifié pour la finale où il a fini 8e avec 30’’32. Holy Antsa Rabejaona a signé un nouveau record de Madagascar du 50m papillon, mais en raison du problème de chrono, les temps ne sont pas encore connus. La pensionnaire du centre international de Kazan a disputé la finale. Ces deux nageurs étaient déjà auteurs d’autres records de Madagascar sur le bassin de 25m cette année et au 50m papillon pour Holy Antsa à Kazan, et au 50m et 100m brasse pour Jonathan à Mahajanga. T.HL’article Natation : Holy Antsa et Jonathan signent deux nouveaux records nationaux a été récupéré chez Midi Madagasikara.